L3 Shintsha Abakhiqizi & Abahlinzeki - China L3 Shintsha Ifektri
S5750E-26X-SI L2 Dual Stack 40G Intelligent Fibre Shintsha
Iswishi ye-S5750E-26X-SI isizukulwane esisha sokuhlanganiswa okuhlakaniphile nokushintshwa kokufinyelela okwenzelwe i-DCN yamanethiwekhi wesithwali ne-MAN. I-S5750E-26X-SI inikeza ama-24 10GbE (SFP +) kanye ne-2 40GbE (QSFP) amachweba omzimba namandla kagesi angasebenzi, enzelwe isimo se-10G sokufinyelela kanye nenethiwekhi ejwayelekile yokuhlangana kwe-10G enezici zokuklanywa kwebanga le-telecom ezinokwethenjelwa okuphezulu, kanye nokudilizwa. Izici ezibalulekile nokugqamisa Ukusebenza nokukwazi ukuxhumeka kwe-10 Gigabit Ethernet ye-S5750E-26X-SI ...
S5750E (R2) Dual Stack 10G Ethernet Routing Fibre Shintsha
Ukushintshwa kochungechunge lwe-DCN S5750E kugcwele ukushintshwa kwemizila ye-fiber enamachweba we-uplink amisiwe, akhelwe ngaphakathi we-10GbE. Lokhu kushintshwa okuphethwe ngokuphelele kunikeza ukutholakala okuphezulu, ukusabalalisa, ukuphepha, ukusebenza kahle kwamandla, nokusebenza okulula ngezici ezicebile ze-L3. Ilungele ukuhlanganiswa noma isendlalelo sokufinyelela samakhampasi, amabhizinisi, uhulumeni kanye namanethiwekhi abahlinzeki bezinsizakalo. Izici Ezingukhiye Nokuqokomisa Ukusebenza kanye ne-Scalability Ngomthamo omkhulu wokushintsha, i-S5750E (R2) yochungechunge isekela i-wire-speed L2 / L3 forwardi ...
Ukushintshwa kochungechunge lwe-DCN S5750E kungukushintshwa komugqa ongasetshenziswa kwebhizinisi ngamachweba we-uplink amisiwe, akhelwe ngaphakathi we-10GbE. Lokhu kushintshwa okuphethwe ngokuphelele kunikeza ukutholakala okuphezulu, ukusabalalisa, ukuphepha, ukusebenza kahle kwamandla, nokusebenza okulula ngezici ezicebile ze-L3. Ilungele ukuhlanganiswa noma isendlalelo sokufinyelela samakhampasi, amabhizinisi, uhulumeni kanye namanethiwekhi abahlinzeki bezinsizakalo. Izici Ezingukhiye Nokuqokomisa Ukusebenza kanye ne-Scalability Ngomthamo omkhulu wokushintsha, i-S5750E (R2) yochungechunge isekela i-wire-speed L2 / L3 ...